Partners - Tianse
3D Printer kofehy
Toner Fa Rahalahy
Toner Fa Canon
Toner Fa Dell
Toner Fa Epson
Toner Fa HP
Toner Fa Ricoh
Toner Fa Lenovo
Toner Fa Panasonic
Toner Fa Samsung
Toner Fa Toshiba
Toner Fa Xerox
Ink Fa Canon
Ink Fa Epson
Ink Fa HP
Ink Fa Lexmark
Ink Fa Samsung
Fa Aurora Copier
Fa Rahalahy Copier
Fa Canon Copier
Fa HP Copier
Fa Konica Minolta Copier
Fa Kyocera Copier
Fa OKI Copier
Fa Panasonic Copier
Fa Ricoh Copier
Fa Samsung Copier
Fa Sharp Copier
Fa Toshiba Copier
Fa Xerox Copier
Fa Rahalahy Label
Fitoriana File Holder
3D kofehy Solution
Printer Consumables Vahaolana
Famoronana avoaky Vahaolana
TIANSE FIFANDRAISAM-Agent Wanted
Amin'ny maha iray amin'ireo mpanamboatra matihanina tontolo izao ny fanontam-pirinty consumables sy ny birao famatsiana , dia mandray haben'ny avonavon'i in manome ny tena nohavaozina, manan-danja birao vokatra sy ny tolotra. Office filàna dia be ary isika no manolo-tena ny fihaonana rehetra. Noho izany, dia isika mitady foana ho an'ny fandraharahana fiarahamiasa miaraka amin'ny mpiasa eran-tany. Manasa anao amim-pahatsorana izahay mba ho iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny TIANSE Family. Aoka isika miara-miasa mba fanompoana tsara kokoa ny mpanjifa sy ny hanatratra na dia fahombiazana lehibe!
Agent Ny Lafitsara
Miaraka amin'ny matihanina R & D ekipa, dia manan-danja lehibe hametahana ny zava-baovao sy ny famolavolana. Isika dia manome lanja famoronana hevitra sy ireo miezaka hanao fanavaozana sy ny fanatsarana eo amin'ny vokatra.
Maherin'ny 10 taona 'traikefa ao amin'ny orinasa, dia mifantoka amin'ny zavatra atao sy ny efa lasa ny mivelatra isan-karazany fanaovana pirinty sy ny birao consumables fitaovam amin'ny andian-dahatsoratra samy hafa sy ny fomba.
Amin'ny dingana QC hentitra sy henjana in-trano fitiliana, fanoloran-tena isika mba hahazoana antoka manetriketrika ny mpanjifa ihany no handray ny vokatra faran'izay tsara azo atao amin'ny vidiny ambany indrindra.
Fast sy marim-potoana Delivery
Miaraka amin'ny famokarana fototra nanarona 35.000 metatra toradroa any Huizhou sy 5 lehibe trano fanatobiana entana amin'ny trano fanatobiana entana toerana tanteraka hatramin'ny 10.000 metatra toradroa any Shina, ny lahateny azo antoka ao anatin'ny 48 ora ao amin'ny tanàna lehibe Shinoa.
Rehetra manodidina Customer Service-
Miaraka amin'ny ekipa matihanina mpanjifa, 193 mpanjifa matihanina 2.300 foibe sy miara-miasa ny firenena baovao, manome isika rehetra-manodidina sy namboarina tolotra rehetra ny mpanjifa ny fotoana rehetra.
Itokisana TIANSE Brand Sarobidy
TIANSE marika vokatra no tena notahin'i an-toerana sy any ampitan-dranomasina na mpanjifa, ary nivarotra tsara amin'ny e-varotra lehibe sehatra tahaka ny Tmall.com, JD.com sy Amazon, sns Amin'izao fotoana izao, TIANSE manana mihoatra ny 80 marika mpiasa eran-tany.
Agent dia manohana
Laharam-pahamehana Free Sample Support
Fampahafantarana Brand Gifts Support
Regional Resource Customer Support
Professional Agent mpivarotra Support
Professional Technical & Ankehitriny-varotra Support
Agent Fepetra takina
Full fanekena ny orinasa TIANSE kolontsaina, raharaham-barotra tetikady filozofia sy ny fampandrosoana; Strong vonona hiara-miasa amin'ny TIANSE mba hanao raharaham-barotra ny fahombiazana.
Ny orinasa voasoratra anarana ao amin'ny faritra an-toerana miaraka amin'ny hery sy ny raharaham-barotra sasany alalana.
Somary miovaova mpanjifa loharanon-karena sy ny fampandrosoana maharitra ny raharaham-barotra.
Strong barotra hetsika fahaizana ao amin'ny faritra an-toerana miaraka amin'ny raharaham-barotra tsara laza.
TIANSE Join Now!
Manasa anao amim-pahatsorana izahay mba ho iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny TIANSE Family. TIANSE no ho mpiara-miasa tsara indrindra. Andeha isika hiara-hiady raharaham-barotra lehibe kokoa fahombiazana sy fandresena-fandreseny mahavokatra vokatra.